अवांछित क्रियाकलापमा जनप्रतिनिधि ?? « Anumodan National Daily
अवांछित क्रियाकलापमा जनप्रतिनिधि ??
By : - सम्पादकीय
प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०७६, शनिबार १२:५८
जनताको मत प्राप्त गरेर जनताको सेवामा तल्लीन हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू स्वयं अवांछित, अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको घटना दोहोरिदै गएका छन् । पछिल्लो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक सांसद एक महिलामाथि बलात्कार प्रयासमा पक्राउ परेका छन् । बलात्कार प्रयासको आरोपमा लागेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यमाथिको मुद्दाबारे अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ, र यसको छिनोफानो अदालतबाट हुने नै छ । आरोप लगाउदैमा अपराध पुष्टि हुदैन, न त आरोपित व्यक्तिलाई दोषि नै करार दिन सकिन्छ, तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तह तथा प्रदेश सभा सदस्यमाथि एकपछि अर्को गर्दै आरोप लाग्ने क्रम दोहोरिदै गएपछि आम जनमानसमा जनप्रतिनिधिप्रतिको आस्था र विश्वासमा ह्रास आउनु स्वाभाविक हो । ठगी, किर्ते जालसाजी, सार्वजनिक शान्तिसुरक्षामा खलल्, जुवातास, बलात्कार प्रयास सहितका अवांछित, अनैतिक तथा अपराधिक गतिविधिमा जनप्रतिनिधिहरूको नाम जोडिदा जनमानसमा सिर्जना हुने अनास्थाले समग्र राज्य व्यवस्थाप्रतिको आस्थामा कमी आउने खतरा पनि बढ्दै जान्छ । आम जनताले जनप्रतिनिधिबाट उच्च नैतिकत व्यवहारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । कुनै पनि कारणले जनप्रतिधिबाट सानो वा ठूलो कुनै पनि किसिमको गलत कार्य भएमा प्रकारान्तरले जनआस्था नै कमजोर हुन्छ भन्ने जनप्रतिनिधि स्वयंले बोध गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
विगतमा केही सांसद (प्रतिनिधि सभा सदस्य, संविधान सभा सदस्य) को गलत क्रियाकलापका कारण सिंगो राज्य व्यवस्थामाथि नै लान्छना लागेको अवस्था थियो । रातो पासपोर्ट, फोर्टुम, सरकार परिवर्तनका क्रममा खरिदबिक्री, अपहरण जस्ता क्रियाकलाप दोहोरिएका कारण संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाका विरोधीहरूले राज्य प्रणालीमाथि नै प्रहार गरिरहे । र, केही सांसद तथा राजनीतिक दलका गलत तथा अनैतिक क्रियाकलापका कारण संसदीय व्यवस्था नै कमजोर हुनगएको इतिहासको तीतो र कालो अध्याय भइसकेको छ । त्यसैले प्रत्येक जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रत्येक गतिविधि तथा व्यवहारमाथि जनताले निगरानी गरिरहेका छन् भन्ने सधैं बोध गर्नु पर्दछ । त्यसै पनि पछिल्ला दिनमा युवा वर्गबाट सामाजिक सञ्जालका साथै अरु माध्यममा निकै कडा आलोचना तथा टिप्पणी व्यक्त भइरहेका छन् । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारका कामकारबाहीबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेका प्रायः टिप्पणीहरूमा निराशा तथा आक्रोस देखिन्छन् । निश्चित रुपमा कतिपय टिप्पणी अतिश्योक्तिपूर्ण छन्, कतिपय टिप्पणी तथा अभिव्यक्ति आधारहीन छन्, तर यसले केही जनप्रतिनिधिबाट भएगरेका गलत क्रियाकलापको ढाकछोप सम्भव हुदैन ।
मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेको छ । तीन तहका निर्वाचित सरकार सञ्चालनमा छन् । लामो राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष र द्वन्द्वपछि राजनीतिक स्थिरता संगै दीगो शान्ति र समृद्धिको युग शुरु भएको बारम्बार दोहोराइएको छ । तीनै तहमा सुविधाजनक बहुमतका सरकार गठन भएका छन् । तर, दुर्भाग्य सबै तहमा व्यापक आर्थिक अनियमिता तथा भ्रष्टाचार बढेको आरोप दोहोरिदै गएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य प्रणाली लागू भइसकेपछि पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसैमा कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधि गलत क्रियाकलापमा मुछिएका घटना सार्वजनिक हुदा पक्कै पनि यसको परिणा निकै दुःखदायी हुनेछ भन्ने जतिछिटो मनन् ग¥यो, त्यति नै राज्य व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सकिनेछ ।